कला साहित्य – Page 11 – Halkaro
कविताः मेरो पार्टी र बाजेको भोज
भोज र पार्टी बेलगाढा चल्ने युगलाई पर सारेर रकेट कै रफ्तारमा पुग्छु त्यो ठाँउ बाजेले नदेखेको, नभोगेको आकाश मण्डलका ताराहरुको झिलिमिली जस्तै सजाइएको बन्द कोठामा जँहा मान्छेहरु आफूलाई सवोत्तम बनाएर प्रस्तुत भएका छन । साथीका नाममा वाइन र ह्वीस्की हातमा लिएर जमघटको बाहनामा मान्छे आएका छन् । तर अपसोच, कसैका पिडा पोखिन पाएनन् खुसी साट्न […]
प्रगतिशील लेखक संघ तीन नं. प्रदेश संयोजकमा थपलिया
काठमाडौँ, मंसिर २६ । नेपालका बाम साहित्यकारहरुको संगठन प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपालको ३ नम्बर प्रदेशको प्रथम भेला सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त भेलाको उद्घाटन प्रलेसका केन्द्रीय अध्यक्ष मातृका पोखरेलले गर्नुभएको थियो । भेलाले केन्द्रीय उपाध्यक्ष खेम थपलियालाई प्रादेशिक संयोजकमा निर्वाचित गर्दै ७७ सदस्यीय ३ नम्बर प्रादेशिक समितिको पनि घोषणा गरेको छ । […]
प्रकाशित मिति : २०७३, २५ मंसिर शनिबार December 10, 2016
नयाँ ओभरकोटमा ठाँटिएको प्रहरी नीरिक्षक ओचुमेलोभ हातमा एउटा पोको बोकी बजारस्थित चोक पार गर्दै थियो। जफत गरिएको अमलाले भरिपूर्ण टोकरी बोकेको रातो कपालवाला एउटा सहयोगी प्रहरी उसको पछिपछि हिँड्दैथ्यो। चारैतिर सन्नटा अनि चोकमा मानवीय उपस्थिति शुन्य… भोका मानिसहरुलेझैं वरिपरिका पसल र भट्टीका खुला ढोकाहरुले ईश्वरीय श्रृष्टिलाई उदास नजर लगाइरहेका थिए, यतिसम्मकी आसपास कोहि मगन्ते समेत […]
कविताः ‘म मधेसी’
‘म मधेसी’ सबै भन्दा पीडित नेपाली तै पनि मलाई भन्दै छौ तिमी ‘विखण्डनकारी !’ म वर्ष भर एक छाक खाएर एक सरो धोती लाएर हलो जोत्छु र त तिम्रो पेट भरिन्छ । र पनि म तिम्रो नजरमा ‘विखण्डनकारी !’ म नेपालको सीमामा लमतन्न सुत्छु र सीमा जोगिन्छ तिमी राजधानीमा बसेर नेपालको सीमारेखा कोर्छौ दक्षिण चलेको […]
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ मंसिर शनिबार December 4, 2016
कथा प्यारी माई, म अहिले ६ महिनाको भएँ। तिम्रो पेटको आकार क्रमशः विस्तारित हुँदै होला। म तिम्रो पेटको संसारबाट आफू जन्मने स्थानको सम्पूर्ण परिघटना हेरिरहेको छु। मेरा कानले सुन्न थालेका छन्। फोक्सो अलिअलि काम गर्न थालिसकेको छ। मलाई पृथ्वीमा उभिएर हिँड्न मद्दत गर्ने मेरुदण्डले आकार लिएको छ माई। म देख्नसक्ने भएको छु। तिमी पेटभरि […]
निवन्धः हरियो पर्दाभित्र ढुन्मुनिदो जगत्
कुमारी हल छेवैको ‘ताप्लेजुङ इन्जी रेस्टुरेन्ट’ अगाडि दुवै हात खोकिलामा च्यापेर उभिएको छ एक युवक । रेस्टुरेन्टको प्रचलित मानकभित्र नपर्ने ‘इन्जी’ खासमा यस गल्लीको नामुद भट्टी हो । ढोकैमा तलदेखि माथिसम्म ‘हरियो’ मैलो पर्दा झुन्ड्याइएको छ । तिघ्रा देखाएका एक हुल युवती युवकका अगाडिबाट गए । डुङ्डुङ्ती दारु गन्हाइरहेको मुखबाट युवकले आवाज निकाल्यो– सेक्सीहरू । […]
कविता : एउटा डाक्टरका नाउँमा
प्रकाशित मिति : २०७३, १२ मंसिर आईतवार November 29, 2016
विरामी जाँच भन्नु भो– जाँचें । डाक्टरलाई पढाउ भन्नु भो — पढाएँ । खर्च नभएकाहरुलाई गाउँ-गाउँमा गएर उपचार गर्न श्रीमानले कुनै योजना बनाउनु भएन त्यसैले आफ्नै खल्तीको पैसाले दुखीको उपचार गरेँ । छोटा लामा विदामा घर बस्न सकिन कहिले रोल्पाका गाउँ पुगेँ कहिले पाँचथरका थुम्कामा पुगेँ । मैंले के विराएँ र श्रीमान् ? मैले मेरा […]
कविताः दुर्इ शहर
उता चिडियाखाना छ सर्पहरु छन, गोहीहरु छन् स्याल र भालूहरु छन् गिद्धहरु छन् यता मन्त्रालयहरु छन्, क्याविनेट छ प्रधानमन्त्री, मन्त्री, अध्यक्ष र सांसदहरु छन् वाग्मतीको पुलले यी दुबै शहरहरुलाई चुपचाप जोडिदिएको छ
कथाः एउटा अनपेक्षित प्रश्न, ‘तपार्इँ मसँग यौन सम्पर्क गर्नुहुन्छ ?’
प्रकाशित मिति : २०७३, ११ मंसिर शनिबार November 27, 2016
‘तपाईँ मसँग यौन सम्पर्क गर्नुहुन्छ ?’ उसँगको आजको भेटले मलाई केटीप्रति हेर्ने मेरो नजरमा परिवर्तन ल्याई दिएको भान भएको छ । साँच्चि उ कस्ती केटी हो भन्ने खुलदुली मनमा बेग्रल्ती भएर छाएको छ । आँखिर उसले मसँग यस्तो कुरा किन गरि म नै आफै असमन्जमा परेको छु । ‘अरे यार तपाईँ र म मन मिल्यो […]